मध्य अफगानिस्तानमा बिस्फोट हुँदा १५ जनाको मृत्यु - नेपालबहस
मध्य अफगानिस्तानमा बिस्फोट हुँदा १५ जनाको मृत्यु
| २१:०८:३१ मा प्रकाशित
१३ असोज, काबुल । मध्य अफगानिस्तानको डेकुन्डी प्रान्तमा भएको बम बिस्फोटमा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको अफगान गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक आरियनका अनुसार डकुन्डीको कर्जान जिल्लामा तालिबान लडाकू समूहले बिछ्याएको भूमिगत बारुदी सुरुङ बिस्फोटबाट ठूलो क्षति पुगेको हो ।
उहाँले बिस्फोटबाट मारिनेहरुमा अधिकांश महिला र बालबालिका रहेको जानकारी दिए । तालिबान समूहले भने उक्त घटनाका बारेमा केही बताएको छैन । अफगान सरकार र तालिबानबीच कतारको राजधानी दोहामा वार्ता जारी रहेकै अवस्थामा सशस्त्र भिडन्त र बम बिस्फोटनका घटना रोकिएका छैनन् ।
अन्तर–अफगान वार्ता गत सेप्टेम्बर १२ देखि जारी छ । दुबै पक्षले अफगानिस्तानमा जारी लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले दिर्घकालीन युद्धबिराम गर्न प्रयासरत रहेको बताएका छन् । एएनआई
शहीद स्मारकः बाह्य पर्यटकको पनि आकर्षण बन्दै १५ घण्टा पहिले
चन्द्रमाको अँध्यारो तथा चिसो क्षेत्रमा बरफ पाइएको नासाको दाबी २० घण्टा पहिले
‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को ध्वज्जी स्वंय किन उडाउँदैछन् प्रधानमन्त्री ओली ? ६ दिन पहिले
लाेप हुँदै पिङ संस्कृति ५ दिन पहिले
ग्लोबल आइएमई बैंकको १४ प्रतिशत बोनश शेयर प्रस्ताव ४ दिन पहिले
पर्यटकीयस्थल कंके देउराली जाने सिंढी ७ दिन पहिले
बाँदरलाई हानेको गोली लागेर एकको मृत्यु १ दिन पहिले
३० लाख लिएर क्राईमका इन्चार्ज तस्करीलाई सघाउँदै ७ दिन पहिले
कस्ता व्यक्तिले गर्न सक्छन् बलात्कार ? मनोवैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन् ! ४ हप्ता पहिले
दशैंमा गड्डाचौकी सीमानाका सुनसान १ हप्ता पहिले
पच्चीस जनाको क्षमता रहेका कारागारमा ३१ कैदीबन्दी ! ४ हप्ता पहिले
तीन दिनदेखि “ईण्ट्राडे हाई”मा बजार बन्द हुनुको यस्तो छ कारण ? ६ दिन पहिले
फेरि आक्रमक शैलीमा उत्रिए ओली २ हप्ता पहिले
तीन दिन जुवाघर बनेको बजार लयमा, बुलिस स्पिनिङ्ग टप बन्दा अन्य प्राविधिक सूचक कस्ता छन् ? ४ महिना पहिले
कोरोना महामारीका बीच इलाममा एपोलो ट्रमा सेन्टरको शुभारम्भ २ महिना पहिले
नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र शक्तिशाली भ्रमण १ वर्ष पहिले